arimaha diinta Archives - Page 2 of 2 -
Qiso Xanuun Badan.Nin Xaaskisa Dulmin Jiray Oo La Kulmay Arrin Ka Yaabisay””””
January 13, 2017 F.G 0
Waa sheeko Mudan in lagu Cibri qaato una Baahan in aan qofka Baniaadmka ah aan lagu xad Gudbin qofkii la dulmiyana waxaa u wanaagsan in uu ilaahay u bandhigto arinkiisa asiga ayaa Dacwad qade ahee, Waxaa jiri jirtay inan yar oo agoon ahayd oo hooyadeed ahayd cidda keliya ee adduunka u joogta, waxaa guursaday ina’ adeerkeed. Laakiin waxa uu ku noqday nin qallafsan oo dulmi badan u geystay, isaga iyo ehelkiisuba waxa ay xumeeyeen inantii oo ay ula macaamileen sida adeegto iyaga u shaqaysa. Waxaa u dheeraa aflagaado iyo gacan ka hadal badan. waxa ay intaas ku dartay, Gabartii marka ay dareento in dulqaadkii iyo adkaysigii ka dhammaanayaba waxa ay tegi jirtay halka ay adduunyada ugu jeclayd oo ahayd gosha hooyadeed, si ay maalintaa ugu soo nafisto, naftana u tusto in ay jirto cid ay agteeda qiimo ku leedahay. Hooyadeed oo taag darrada da’da ay u raacday xanuunka dayaca ku helay waxa ay arkaysay in aanu u furnayn jid kale oo aan ahayn in ay inanteeda ku waaniso in ay gurigeeda iska haysato Alle hortiina [Sii aqri]
Maxaa Kala Dhex Maray Ninkii Dalxiisaha Mareykanka Ahaa Iyo Odaygii Caaqilka Muslimka Ahaa.
January 5, 2017 F.G 0
Nin u dhashay Dalka Maraykan ayaa tuulo ka mid ah dalka Turkiga u dalxiis tegay ,waxaana uu tuuladaasi dadkii degenaa weydiiyay ninka u caqliga badan tuuladan inay u tusaan. Waxay u geeyeen nin Muslim ah Oo Alle Ku xiran oo guri yar ku jira , kaasi oo ay u yaaleen kutub iyo gogoshii uu ku seexanayay oo keliya. Ninkii Maraykank ahaa oo yaaban ayaa ku yiri “ Oo Meeday alaabtii guriga ku taalay “? Odaygii ayaa ku yiri oo adiga taadii Meeday ? Ninkii dalxiiska ahaa ayaa ku jawaabay anigu waxaan halkan ku joogaa dalxiis, waxaan ka imid dalka Maraykanka oo aan u dhashay alaabtaydiina halkaas ayay taallla.. Ninkii Odayga ahaa ay ku yiri “ Aniguna sidaada oo kale ayaan ahay halkan dalxiis ayaan ku jooga “. Ninkii Maraykanka ah oo yaaban oo aan weli jawaabin ayuu haddana raaciyay “ Miskiin Banii’adam waa dalxiisaha dunidan oo wakhti yar joogaya, hadaan wuu isku mashquulinayaa, oo wahktigiisa badankiisa ku bixinaya”” Marka alaabtaydii waa cabsida Allah (sw) ee aan iga hayreyn markaan hoygagii runta ahaa gaaro.ee halkan ku Nasnayaa
December 20, 2016 F.G 0